ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်တွေကို ဘယ်လို အပေါ်ထပ်တွေနဲ့ တွဲဝတ်မလဲ
ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်တွေကို ဘယ်လို အပေါ်ထပ်တွေနဲ့ တွဲဝတ်မလဲ
12 Oct 2018 . 3:58 PM
ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်တွေကို ဘယ်လို အပေါ်ထပ်တွေနဲ့ တွဲဝတ်မလဲ
မိန်းကလေးတော်တော်များကတော့ ဂါဝန်မကြိုက်တဲ့သူရယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အခုဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ ဂါဝန်လေးတွေ ပြန်အ၀တ်များလာကြသလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လှပတဲ့ French Girl Dress လေးတွေ ကောင်မလေးတွေကြားထဲ ရေပန်းစားလာတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ဂါဝန်တစ်ထည်တည်း ၀တ်ရတာ အရမ်းပျင်းစရာကောင်းတယ်လေ။ ကိုယ်ဝတ်မယ့် ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်ပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အပေါ်ထပ်လေးတွေနဲ့ ရံဖန်ရံခါ တွဲဝတ်ကြည့်တာက ပိုဆန်းသွားစေသလို စတိုင်လ်တစ်မျိုးလည်း ထပ်ရစေတာမို့ ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်တစ်ထည်တည်း ရိုးရိုးကြီးဝတ်မယ့် အစား အောက်မှာပြောပြထားသလို အပေါ်ထပ်လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ….
Jean ကတော့ ဘာနဲ့တွဲတွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ..ဂါဝန်တွေနဲ့ တွဲဝတ်လိုက်လည်း မိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်လေးတွေနဲ့ဆို ချစ်စရာကောင်းပြီး လူငယ်ဆန်တဲ့အသွင်ကို ရရှိစေသလို ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်လို့လည်း လွယ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မဝတ်ရင်တောင် အပေါ်က ခြုံတာတို့၊ ပခုံးတစ်ဝက်လျှောပြီး ဝတ်တာတို့လည်း လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
မထူမပါး Sweater Cardigan လေးတွေက မကြာခင်ရောက်တော့မယ့် ဆောင်းရာသီနဲ့လည်း အံကိုက်ပါပဲ။ ခရီးတွေ ဘာတွေသွားတဲ့အခါ Sweater Cardigan လေးက ဝတ်လို့အဆင်ပြေသလို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း လှပါတယ်။ ခါးနည်းနည်း ရှည်တဲ့ Sweater Cardigan လေးတွေက နည်းနည်း Fit ဖြစ်တဲ့ ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်တွေနဲ့ ပိုအဆင်ပြေပြီးတော့ ဂါဝန်ကားကားလေးတွေကတော့ ကိုယ်လုံးအတိ ရင်စေ့ Sweater Cardigan လေးတွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။
Leather တွေနဲ့ တွဲဖက်လိုက်မယ်ဆိုရင် မမိုက်တဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ မိန်းမဆန်တဲ့ ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်
တွေနဲ့ Leather Jacket တွေကို တွဲဖက်ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်မျိုးတော့ ဆန်းသွားမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီစတိုင်လ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Hangout လုပ်တဲ့အခါ ဝတ်လို့ရသလို Shopping ထွက်တဲ့အချိန်၊ မွေးနေ့ပါတီတွေဘာတွေ သွားရင်လည်း ဝတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Leather Jacket ကြောင့် ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်ရဲ့ အရောင်လည်း ပိုထွက်သွားမှာပါ။
Bomber Jacket လေးတွေကို ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်တွေနဲ့ တွဲဝတ်လို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခပ်ပါးပါး Bomber လေးတွေက ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်လို့ကောင်းတဲ့အပြင် မိန်းမဆန်ပြီး သူများနဲ့ မတူတဲ့ စတိုင်လ်ကို ရရှိစေပါတယ်။ အေးတဲ့အချိန်ဆိုလည်း Bomber ထူထူလေးတွေနဲ့ ရှိုးထုတ်လို့ရသေးတယ်နော်။
ပုံမှန်အပေါ်ထပ်တွေနဲ့ မတွဲချင်တော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ရှိပြီးသား Shirt Dress အရှည်တွေနဲ့ တွဲလိုက်လို့ရပါတယ်။ အပေါ်ဝတ်ရုံဖားဖားလို Shirt Dress တွေနဲ့ ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရမ်း ကားကားဖားဖား ဂါဝန်တွေထက် ကိုယ်ကျပ်ဂါဝန်လေးတွေကို ဦးစားပေးသင့်ပြီးတော့ အစင်း Shirt Dressတွေ၊ ဖဲလို ဝတ်ရုံဖားဖားတွေနဲ့ တွဲဝတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီစတိုင်လ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ဆန်းသွားမှာ အသေအချာပါ။
ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျတှကေို ဘယျလို အပျေါထပျတှနေဲ့ တှဲဝတျမလဲ
မိနျးကလေးတျောတျောမြားကတော့ ဂါဝနျမကွိုကျတဲ့သူရယျလို့ မရှိသလောကျပါပဲ။ အခုဒီနှဈပိုငျးတှမှော ကောငျမလေးတှအေနနေဲ့ ဂါဝနျလေးတှေ ပွနျအဝတျမြားလာကွသလို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ လှပတဲ့ French Girl Dress လေးတှေ ကောငျမလေးတှကွေားထဲ ရပေနျးစားလာတာ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတလမှော ဂါဝနျတဈထညျတညျး ဝတျရတာ အရမျးပငျြးစရာကောငျးတယျလေ။ ကိုယျဝတျမယျ့ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျပုံစံနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အပျေါထပျလေးတှနေဲ့ ရံဖနျရံခါ တှဲဝတျကွညျ့တာက ပိုဆနျးသှားစသေလို စတိုငျလျတဈမြိုးလညျး ထပျရစတောမို့ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျတဈထညျတညျး ရိုးရိုးကွီးဝတျမယျ့ အစား အောကျမှာပွောပွထားသလို အပျေါထပျလေးတှနေဲ့ တှဲဝတျကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ ….
Jean ကတော့ ဘာနဲ့တှဲတှဲလိုကျတယျဆိုတဲ့အတိုငျးပါပဲ..ဂါဝနျတှနေဲ့ တှဲဝတျလိုကျလညျး မိုကျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျလေးတှနေဲ့ဆို ခဈြစရာကောငျးပွီး လူငယျဆနျတဲ့အသှငျကို ရရှိစသေလို ခပျမိုကျမိုကျပုံစံကိုပွောငျးလဲလိုကျလို့လညျး လှယျပါတယျ။ တကယျလို့ မဝတျရငျတောငျ အပျေါက ခွုံတာတို့၊ ပခုံးတဈဝကျလြှောပွီး ဝတျတာတို့လညျး လုပျလို့ရပါသေးတယျ။
မထူမပါး Sweater Cardigan လေးတှကေ မကွာခငျရောကျတော့မယျ့ ဆောငျးရာသီနဲ့လညျး အံကိုကျပါပဲ။ ခရီးတှေ ဘာတှသှေားတဲ့အခါ Sweater Cardigan လေးက ဝတျလို့အဆငျပွသေလို ဓာတျပုံရိုကျရငျလညျး လှပါတယျ။ ခါးနညျးနညျး ရှညျတဲ့ Sweater Cardigan လေးတှကေ နညျးနညျး Fit ဖွဈတဲ့ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျတှနေဲ့ ပိုအဆငျပွပွေီးတော့ ဂါဝနျကားကားလေးတှကေတော့ ကိုယျလုံးအတိ ရငျစေ့ Sweater Cardigan လေးတှနေဲ့ ပိုလိုကျဖကျပါတယျ။
Leather တှနေဲ့ တှဲဖကျလိုကျမယျဆိုရငျ မမိုကျတဲ့ ဖကျရှငျဆိုတာမရှိပါဘူး။ မိနျးမဆနျတဲ့ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျ
တှနေဲ့ Leather Jacket တှကေို တှဲဖကျဝတျလိုကျမယျဆိုရငျ တဈမြိုးတော့ ဆနျးသှားမှာ သခြောပါတယျ။ ဒီစတိုငျလျက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Hangout လုပျတဲ့အခါ ဝတျလို့ရသလို Shopping ထှကျတဲ့အခြိနျ၊ မှေးနပေ့ါတီတှဘောတှေ သှားရငျလညျး ဝတျသှားနိုငျပါတယျ။ Leather Jacket ကွောငျ့ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျရဲ့ အရောငျလညျး ပိုထှကျသှားမှာပါ။
Bomber Jacket လေးတှကေို ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျတှနေဲ့ တှဲဝတျလို့ရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခပျပါးပါး Bomber လေးတှကေ ပှငျ့ရိုကျဂါဝနျလေးတှနေဲ့ တှဲဖကျလို့ကောငျးတဲ့အပွငျ မိနျးမဆနျပွီး သူမြားနဲ့ မတူတဲ့ စတိုငျလျကို ရရှိစပေါတယျ။ အေးတဲ့အခြိနျဆိုလညျး Bomber ထူထူလေးတှနေဲ့ ရှိုးထုတျလို့ရသေးတယျနျော။
ပုံမှနျအပျေါထပျတှနေဲ့ မတှဲခငျြတော့ဘူးဆိုရငျ ကိုယျ့မှာ ရှိပွီးသား Shirt Dress အရှညျတှနေဲ့ တှဲလိုကျလို့ရပါတယျ။ အပျေါဝတျရုံဖားဖားလို Shirt Dress တှနေဲ့ ဝတျလိုကျမယျဆိုရငျ အရမျး ကားကားဖားဖား ဂါဝနျတှထေကျ ကိုယျကပျြဂါဝနျလေးတှကေို ဦးစားပေးသငျ့ပွီးတော့ အစငျး Shirt Dressတှေ၊ ဖဲလို ဝတျရုံဖားဖားတှနေဲ့ တှဲဝတျလို့ရပါတယျ။ ဒီစတိုငျလျနဲ့ဆိုရငျတော့ ဆနျးသှားမှာ အသအေခြာပါ။